Ukuba une-APFS, yenza umfanekiso okhawulezayo wenkqubo yakho ngaphandle kokuya kwiXesha loMatshini | Ndisuka mac
Ukuba une-APFS, yenza umfanekiso okhawulezayo wenkqubo yakho ngaphandle kokuya kwiXesha loMatshini
UJavier Porcar | | Tutorials, Ezahlukeneyo
Inkqubo yefayile entsha ye-APFS izisa ngakumbi intloko ebuhlungu kwabanye abasebenzisi. Kodwa ikwazisa izibonelelo ezininzi okanye imisebenzi enokusinceda kule mihla yethu. Njengoko sibonile kwinkcazo-ntetho yakhe kwi-WWDC yokugqibela, sinokuba nekopi yefayile ngoko nangoko kwenye indawo yenkumbulo. Ewe, loo msebenzi awusebenzi yenza umfanekiso wenkqubo yethu kwaye ukwazi ukuyisebenzisa xa kufuneka ubuyisele inkqubo kwindawo yangaphambili . Ngokusengqiqweni, lo msebenzi uya kusebenza kuphela ukuba sine-MacOS High Sierra kwikhompyuter yethu kwaye sisebenzisa inkqubo yefayile ye-APFS.
Ukufezekisa ezi mfuno, ukwenza umfanekiso wenkqubo yethu kube lula njengoku:
Faka umyalelo: I-sudo tmutil isifinyezo
Into esiyenzayo yikopi, ebekwe kwimemori yeMac yethu, ukuba isetyenziswe kwixesha elizayo. Lo msebenzi uluncedo ukuba inkqubo ayizinzanga okanye sinento enobungozi kwi-Mac yethu.Kwelinye icala, ukuba sinengxaki kwidiski yethu yememori, kufuneka sibhenele kwikopi eyenziwe kwiTime Machine, ethi ngokungagqibekanga, yenza iikopi ngeyure nganye kwidiski yangaphandle.
Kwimeko apho ufuna ukubhenela kwikopi ekhawulezileyo, kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Qalisa kwakhona iMac yakho.
Xa usiva isandi sokuqalisa, cofa Cmd + R.
Xa imenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ivela, cinezela Buyisela ukusuka ku-Backup Machine.
Ngoku ikucela ukuba ukhethe idiski apho unayo ikopi ofuna ukuyisebenzisa. Ngeli thuba, sikhetha ikopi yediski yethu yangaphakathi, Oko kukuthi, khetha iMac disk.
Ngoku, inkqubo ikubonisa zonke iifoto ezithathiweyo, khetha enye oyifunayo kwaye ucinezele Qhubeka.
Zimbalwa zezinto zokugqibela eziqwalaselweyo: eyokuqala, le izifinyezo akufuneki zithathe ezinye iikopi kuqhubo lwangaphandle, kuba ingxaki isenokuba yidiski uqobo kwaye kwimeko apho ngekhe ubenesipele. Kwelinye icala, gcina engqondweni ukuba Inkqubo iya kucima ezona kopi zidala, xa ungenayo indawo eyaneleyo, ke ngoko sikucebisa ukuba ubeke iliso kwiikopi ezenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuba une-APFS, yenza umfanekiso okhawulezayo wenkqubo yakho ngaphandle kokuya kwiXesha loMatshini
Idokethi entle kakhulu yeApple Watch yakho
I-WhatSize isibonisa ngokucacileyo ukuba sisebenzisa njani isithuba kwi-hard drive yethu